Sajhasabal.com | Homeकलिलै उमेरमा चर्चा बटुल्दै वर्षा (भिडियोसहित)
मो इमरानखान/भदौ ५, कपिलवस्तु । कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभुमि नगरपालीका ४ बुड्ढीमा वि.सं.२०५५ साल वैशाख ५ गते बुबा राजु लम्साल र आमाविन्दु लम्सालको कोखबाट जन्मलिएकि बर्षा लम्साल यतिबेला नेपालीलोक सांगितिक क्षेत्रमा उदाएकि छिन् ।
प्राविधिकतर्फ भेटेरेनरी (जेटिए) र उच्चशिक्षातर्फ १२ कक्षा अध्ययन गरिरहेकि वर्षाले लोक संगितमा पनिआफ्नो पाईला चालेकि हुन । सामान्य परिवारमा हुर्केर्कि बर्षाले १९ वर्षकै कलिलो उमेरमै दुई वटा एल्वमहरु बजार सम्मल्याउन सफल भएकि छिन ।
उनको पहिलो लोकदोहोरी एल्वम(परेवीले)हो, जसमा लयरशब्ददिपक भण्डारी, श्वर लम्साल र भण्डारीको रहेको छ भने उक्तगितमा सुमन, शिक्षा र सुनिलले अभिनय गरेका छन् ।
परेविलेको सफलता सँगै उनले यसपलिको तिजमा तिजगी तएल्वम (चट्ट मायालु) बजार सम्म ल्याईन सो गित दर्शक श्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल भएको उनले दावी गर्छिन । जुन गितमा स्वर शिव खनाल र वर्षाको रहेको छ भने लय विधान कार्कि र शब्द खनालको नै छ ।
जसमामोडल पार्वती राई र राजु महोत्राले अभिनय गरेका छन् । त्यस्तै दशैसम्म केहि गितबजार सम्मल्याउने तयारीमा रहेको उनि बताउछिन् । उनका यि एल्बमहरु देशका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले निकै रुचिका साथ प्रशारण गरि सम्पूर्ण श्रोता दर्शकको माझमा पुराएका छन् ।
भनिन्छ भगवानले सबै प्राणीलाई केहि न केहि शक्तिप्रदान गरेका हुन्छन त्यो अद्भुत क्षमतालाई बाहिरी रुपमा ल्याउन त्यसै अनुसारको वातावरण आवश्यक पर्दछ । हो सानै उमेरमा वर्षाले त्यो अवसर प्राप्त गरेकि छिन् र सांगीतिक क्षेत्रमा फराकिलो धरातलबनाउने दाउमापनि छिन ।
संगित क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नु भयो भन्ने प्रश्नमाउनि भन्छिन ‘‘सानैदेखि लोक संगितमाअत्यन्तै रुचिथियो र मैले पनिएल्वमहरु बजारसम्मलिएर दृढ संङकल्पकालोक संगितमालागेर आफ्नो चिनारी बनाउउने छु भनेर १३र१४ वर्षको उमेरमा उद्देश्यलिएर अगाडि बढ्न शुरु गरे, फलस्वरुप घरपरिवार, आफन्तजन, दिपक भण्डारी, सन्तोष पन्थीलगाएतको विशेष सहयोगले गर्दा १८ वर्षको उमेरमापहिलो एल्वमबजार सम्मल्याउन सफलभए ।
”कपिलवस्तु, रुपन्देहि, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पालगाएतकाजिल्लाहरुमाहुने मेलामहोत्सवतथाविभिन्न सांस्कृतिककार्यक्रमहरुमाउनका प्रस्तुतिले यतिबेलानिकै चर्चा पाउने गरेका छन् । उनि १८ र १९ वर्षको उमेर मै स्टेज तताउनलागेकि छिन । श्वरकिधनिलम्सालले अबआफ्नो जिन्दगिको यात्रालाई कलाकारीताको माध्यम बाट अगाडि बढाउँदै नेपालीलोक कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने बताउछिन् ।
सांगितिक क्षेत्रमाप्रवेश गर्नेको संख्यादिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ, कलाकारहरु एकाएकचर्चामापुग्ने र एकाएक सेलाउने गरेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामापनितपाई सबैभन्दाउत्कृष्ठ हुन्छु र सफलभएरै छाड्छु भनेर दावीगर्ने आधार के हो त ?भन्ने प्रश्नमाउनि भन्छिन,“मेरो लक्ष्य नै मौलिकताझल्कने गितसंगितको संरक्षण गर्नु हो र जसको लागीम सँग प्रशस्तकला र गला छ त्यसैले सफलहुनेमा ढुक्क छु । जसमादर्शक श्रोताको साथ त अनिवार्य छ ।
यदि सहि मार्ग पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सफलताखोज्दै भौतारीनु पर्दैन सफलताआफूलाई खोज्दै आउनेछ । पछिल्लो समय हाम्रो देशमाआफनो मौलिक पन विर्सने गरी नै गितहरु गाउनथालिएको छ ।
कलाकार पिच्छे म्यूजिककम्पनिहरु र नेपालिगितमाहिन्दी र्याप, अङग्रेजि, र्याप जस्ता कुरा अहिले नौलो कुरा होईन । पैसाको आडमा चर्चा कमाउने गितकारहरु पनिअहिले प्रसस्त देख्न पाईन्छ ।
नभएको कला पैसाकै भरमाचर्चित र भएको कला पैसाको अभावमा सधै मनमामात्र यो कुरा पनिनौलो छैन । आमाबुबाको एक्ली छोरी लम्साल यस्तो कठिन परिस्थितिकाबावजुतपनिआफ्नो अडान कायम राख्दै केहि गरु भन्ने उद्देश्यलिएर सांगितिक क्षेत्रमाआएकि छिन । हुनतकलाकार बनेर चर्चा कमाउने रहर कसलाई हुँदैनर ? तर वर्षासँग यो क्षेत्रमापनि केहि गर्न सक्ने आँट देखिन्छ । उनको स्वरमादम देखिन्छ ।
ठुलो सपनाबोकेर सांगितिक क्षेत्रमाप्रवेश गरेकि वर्षा पनिकतै असफलहुनेत होइनिन् ? यो उनको मिहनत र अडानमा भर पर्दछ । सानै उमेरमाचर्चा कमाउन सफल वर्षा ठुलो कलाकार बन्ने सपनाबोकेर हिडेकि छिन । अबउनलाईअग्रजकलाकारको साथ र सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।